सभ्यतागत विज्ञान र "पेटेन्टको" लडाइँ
लिम्बुले नचाए, मञ्जुल र प्रदिपले भावुक बनाए यूएईका...
Ethnic federalism लाई Natioanlity based भनेर व्या...
पहिलो नेपाली तारा दिपक लिम्वु दुवईमा आउने
हर्के र प्रजातन्त्र
हिजो र आजमा हामीले पाएका परिवर्तन
कामरेड !, के विदेशीकै ‘सहयोग’मा विदेशी हस्तक्षेप र...
गाऊँखाने कथा - ३२ (Nepali Gau Khane Katha)
झुमे नेपालीहरु दुवईमा देउसी भैलो सांस्कृतिक कार्यक...
जलेको ह्रदयमा फुलेको प्रेम -२
- निर्मलमणि अधिकारी "आयोदधौम्य"
विज्ञान अविरल प्रवाहमान् धारा हो । यो क्रमबद्ध ज्ञान-संचयको श्रृंखला हो । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने औपचारिक प्रयोगशाला ल्याबोरेटरी मा बसेरमात्र वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिने होइन; यो त हामी प्रत्येकको दैनिकी पनि हो । जस्तोकि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक रघुनाथ अनन्त माशेलकर भन्नुहुन्छ- व्यावहारिक अनुभव पहिले हुन्छ र त्यसलाई व्याख्या गर्नेवाला वैज्ञानिक सिद्धान्त त्यसपछि बनिन्छन् । प्रायः प्रविधि पहिले आउँछ र विज्ञान तत्पश्चात् । हामीलाई पांग्रा बनाउन पहिल्यै आउँथ्यो र त्यसपछिमात्र गति विज्ञानको विकास भएको हो । वाष्प-ईन्जिजन पहिले बनेका थिए र थर्मोडाइनामिक्स त्यसपछिमात्र । शताब्दीयौं वा सहस्राब्दीयौं देखिनै मान्छेले प्राकृतिक जीवनको प्रयोगशालामा अनेकौं परीक्षण (Test), प्रयोग (Experiment), एवम् पर्यवेक्षण (Observation) गर्दै
Posted by: Dautari Admin Labels: शोध/ अध्ययन
लिम्बुले नचाए, मञ्जुल र प्रदिपले भावुक बनाए यूएईका प्रवासी नेपालीहरुलाई
नेपाली गीत संगित जगतमा भर्खरै उदाएका र छोटो समयमा चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल यूवा यूवतीका ढुकढुकी तथा पहिलो नेपाली तारा दिपक लिम्बुले नेपाली समाज यूएईले आयोजना गरेको सुमधुर सास्कृतिक कार्यक्रममा यूएईका प्रवासी नेपाली विषेश गरेर यूवायुवतीहरुलाई छम छम्ती नचाए भने नेपाली गीत संगीतका हस्ती साहित्यकार तथा जनताका गायक मञ्जुल तथा क्रान्तिकारी गायक प्रदिप देवनले दर्शकहरुलाई भाव विहल बनाए ।
यहि नोभेम्वर २० २००९ का दिन दुवईको अस्टोरिया होटलमा नेपाली समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालबाट निम्ताईएका नेपाली तारा दिपक लिम्वुले यहाँ देशको चिन्ता तिमी मायाँ मायाँ भन्छौ, तन प्रदेशी भयो मन गाउँ बेसी, तिम्रो रुपको चर्चा छ रुपको बजारमा, ढल्क्यो ढल्क्यो जोवन मेरो पल्कयो पल्क्यो, यो मन मेरो तिमी तिरै सानु, मागेर माग्ने भने म एउठा फुल के मागु यो धर्ती सँग तिम्रो लागि बरु तारा मागुकी यो धर्ती सँग तिम्रो लागि, लगायत विभिन्न नेपाली चलचित्रका गितहरु गाएकाका थिए भने उनको अतिनै लोकपि्रय हिम्मत चलचित्रको मैले त्यहि भएर मन पराए भन्ने गीतलाई दर्शकहरुले बढि रुचाए । कार्यक्रमको अन्त्यमा उनको भर्खरै आउन लागेको दोश्रो एल्वमको मायाँ मायाँ भन्ने गीत गाउँदा उनी लगायत दर्शकहरु स्टेजमा नै गएर उनलाई नाच्नमा साथ दिएका थिए भने उनको हॆ हे र हाहामा दर्शकहरुले साथ दिदा हल गुज्जयमान भएको थियो ।
साहित्यकार कवि तथा जनताका गायक माजुल स्टेजमा पुग्दा र उनको साथमा रहेको गितारको सुमधुर संगितको तालसँगै पहिलो पस्तुतिले दर्शकलाई अति मर्माहत बनायो । उनले गीत गाउनु भन्दा पहिला उपस्थित दर्शकहरुलाई ताली बजाउन हा हा हु हु गर्न र गायनमा उनलाई साथ दिन रोक लगाई उक्त गीतको शब्द तथा लय सुन्न आग्रह गरे र उनले भने म अन्त्यमा तपाईहरुले नेपाली लोक भाकालाई कत्तिको मनपराउनुहुने छ यदि मन पराउनु हुने छ भने म नेपालमा गएर यहि सन्देश दिनेछु भने र उनले लोक गायक झलकमान गन्धर्वको आमाले सोध्लीन खै छोरो भन्लीन भन्ने पुरानो भाकाको गित विना ट्याकमा गाए । गीतको अन्तिम शब्द नसकिदै दर्शकहरुको पटटट ताली र वान्समोर अनि विवहल मुद्रामा वाह वाह गर्दा उनि पनि विवहल भए र भने नेपाली लोक संगितलाई नेपालमा भन्दा पनि प्रवासमा धेरै मायाँ गर्नुहुदो रहेछ म यहि सन्देश नेपालमा सुनाउने छु भन्दै उनका चर्चित गित गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ लगायत अन्य गितहरु दर्शकहरुसँगै गाए ।
अर्का क्रान्तिकारी गायक प्रदिन देवनले क्रान्तिकारीले ओतपोत गीत गाई दर्शकहरुलाई मनोराजन दिलाए । अरुण तरेर नाना तम्मर तरेर उनको अति लोकपि्रय गीत तथा अन्य गीतहरु गाएका थिए ।
यूएईमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा आफ्ना उत्कृष्ट प्रस्तुतिहरु पस्कदै आएका किरण भट्राई, रिजन थापा, पूर्ण तमु, प्रकाश पराजुली, दिपक गुरुगं, ज्ञान लामा, मिना वाईवा, प्रेम लामा, अलिन दोड, सूर्य के।सी, सरस्वती थोकर, शान्ति शाह, आशिष राई, सुलोचना श्रेष्ठ, दिपक गुरुड., मेघ, रेखा, डिकी योजन, सम्झना वाईवा, विमला श्रेष्ठ, रबिन परियार, पूजा लामा,पृय स्याड।वो आदिले आफ्ना गीत तथा नृत्यबाट दर्शकहरुलाई मनोराजन दिए ।
स्याड।जालीलाई नभन जाली भन्ने लोक गितको नृत्य अति आकर्षक बनेको थियो उक्त गितमा दिपक लिम्वु महिलाको भेषमा भने उनलाई साथ दिएका थिए मेहले ।
नेपाली समाज यूएईका अध्यक्ष यम प्रसाद तमुको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अथिति नेपालीदूतवास अबुधावी यूएईका राजदूत अजुर्न बहादुर थापा रहेका थिए भने अत्य उपस्थितिहरुमा दूतावासका द्धितिय सचिव लोक बहादुर क्षेत्री पौडेल श्रम सहचारिका पार्वती अर्याल एनआरएन आई सि सिका कोषाध्यक्ष रामेश्वर शाह एन आरएन ए एन सि सिका अध्यक्ष चुणामणी ढकाल लगायत यूएईमा स्थापना भएका विभिन्न नेपाली संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरु पत्रकार ब्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने दुवई तथा अबुधावी र अन्य यूएईका स्थानबाट प्रवासी नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
पहिलो चरणको कार्यक्रम नेपाली समाजका सचिव उत्तम अधिकारी तथा दोश्रो चरणको कार्यक्रम लोक गायक असिम महतले साचालन गरेका थिए । उक्त सास्कृतिक कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई नेपाली समाजका महासचिव नारायण अधिकारीले स्वागत गरेका थिए ।
नेपाली समाजलाई विगत लामो समय देखी सास्कृतिक क्षेत्रमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी सरस्वती थोकरलाई समाजले विषेश सम्मान गरेको थियो भने विश्व पत्रकार साजालमा यूएईबाट संयोजकमा चुनिएका नेपाल पत्रकार महासँघ यूएईका अध्यक्ष जाकिर हुसेन तथा भर्खरै यूएईमा श्रम सहचारी भइ आएकी पार्वती अर्याललाई पनि समाजले सम्मान गरेको थियो ।
कार्यक्रम दिनको ५ बजे देखि सुरु भई साँझ १० बजे समाप्त भएको थियो । उक्त सास्कृतिक कार्यक्रमको प्रायोजन पानासोनिक नेपाल एयरलाईन्स जेट एयरलाईन्स यूएई एक्सचेन्ज डेनास्कि टाभल्सले गरेको थियो । उक्त सास्कृतिक कार्यक्रमको संयोजन तुलसी तामाड।ले गरेका थिए ।
Ethnic federalism लाई Natioanlity based भनेर व्याख्या गर्ने प्रयास, किन ?
डाक्टर मंगलसिद्धि मानन्धर ( नेवार विद्वान ) र परशुराम मेघी गुरूङ ( जनजातीय एमाले नेता ) लगायतको एउटा समितिले ड्राफ्ट गरेको , नेकपा एमाले दलको नया नेपालका लागि जातिय संघियताको खाका हिजो नेपाली छापाहरूमा सार्वजनिक भएको छ । एमाले पार्टी भित्रकै अर्को प्रभावशाली समूहले यसको औचित्यतामा प्रश्न उठाएको भए तापनि , यसको एक प्रति संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा बुझाइसकिएको स्थितिमा यसैले नै वैधता हासिल गर्न सक्ने सम्भावना बलियो भाएको छ । एमालेले सार्वजनिक गरेको यो खाका हुबहु नभए पनि अधिकांश रूपले , माओवादी दलको अवधारणासंग मिल्दो जुल्दो रहेको छ । झलनाथ खनाल नेतृत्वमा रहेको एमाले पार्टीको अहिलेको संस्थापन पक्षका आधा जसो नेताहरू, अहिले पनि माओवादीसंग नै हरेक कुरामा कार्यगत तरिकाले एक भएर मुलुकको राजनीतिमा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकाले पनि यो बुझ्न गाह्रो छैन कि, यही पक्षको नेतृत्वको निर्देशनमा जातीय संघियता सन्दर्भमा समेत माओवादी अवधारणालाई एमालेले लगभग सोह्रै आना अनुकरण गर्न खोजेको छ । दुवै पार्टीका प्रस्तावित केही राज्य वा प्रदेशहरू केवल जातिका नाममा हुनेछन् र तिनका नामहरू: लिम्बुवान, खुम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा:, तमुवान, मगराँत, थारुहट रहनेछन् ।
अहिलेको संविधानभाको बनोटका आधारमा , पहिलो ठूलो पार्टी माओवादी र तेस्रो पार्टी एमालेको जातीयतावादी संघियताको अवधारणा मिल्न जानु भनेको निकै ठूलो निर्णायक प्रभाव पार्न सक्ने कुरा हो । जातीयतावादी संघियताको खरो बिरोधमा उत्रेको एक मात्र पार्टी मोहन विक्रमको नेकपा एकीकृतको संविधानसभामा कमजोड उपस्थिति एवं अन्य जातीय संघियता बिरोधी दल मध्ये दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र ऊ लगायतका दलहरूको समीकरण त्यति बलियो वा निर्णायक बहुमतमा नरहने स्थितिमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरिने अवस्था पैदा भएमा , कम्युनिष्ट घटकहरूको जातिय संघियता नै भावी नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूप हुने सम्भावना यस परिप्रेक्ष्यमा प्रबल बनेको महसुस हुनु स्वाभविक हो ।
जातिय संघियतामा हुरुक्क हुने दलहरूको रोचक कुरा त के छ भने जातिय संघियतामा जाँदा जाँदै पनि र मुलुकलाई जातियताका आधारमा पुनर्नक्शांकन वा सीमाङ्कन गर्न खोज्दा पनि , यसलाई जातियता कै आधार हो भनेर स्वीकार्ने सामर्थ्य भने देखाउन सकेका छैनन् । कामरेड बाबुराम भट्टराईदेखि डाक्टर मानन्धरसम्मको दलील छ , राज्यको पुनर्संरचना माथि उल्लेख गरिए झैँ जातिय आधारमा हुँदा पनि , यो ‘इथ्निसिटी’ मा आधारित नभएर ‘नेस्नालिटी’ मा आधारित हो रे ! तर उनीहरूले जे दावा गर्ने गरे पनि , तिनै पार्टीका अरू दस्तावेजहरू भने यो भाषामा बिमति जनाइरहेका देखिन्छन् । उदाहरणका लागि , माओवादीका प्रभावशाली नेता र सो पार्टीका संघीय पुनर्संरचनाको खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका नेता देव गुरूङ् भने नया नेपालको संघीय स्वरूपले अहिलेसम्म खस –बाहुन राज्यवादी संरचानले दमित बनाएका जनजातिहरूका नाममा अग्रधिकार समेत व्यवस्था गरिएको आत्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न राज्यहरूको व्यवस्था गरिनेछ । यसको अर्थ यो पनि हुनसक्छ , उदाहरणका लागि तमुवानमा बसोवास गर्ने गुरुङ वा विशेष अधिकार प्राप्त कुनै निश्चित जातीले जग्गा वा संपत्ति आर्जन वा दर्ता , कर वा अन्य कुरामा जुन कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्नेछ त्यो , त्यही प्रदेशमा बसोवास गर्ने अन्य जातिका लागि अलग प्रकारको पनि हुन् सक्नेछ । अग्राधिकारको अर्थ त्यही नै हुन आउँछ भने स्वायत्तताको आत्मनिर्णयको अधिकारले भने मुलुकको संघमा रहने वा नरहेर स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा छुट्टिने भन्ने अधिकार सम्बन्धित राज्यको सरकारले चाहेमा संवैधानिक प्रकृया अनुसार जनमत संग्रह आदिबाट गर्न पनि सकिनेछ ।
जे होस्, प्रयोग नौला र नया हुन खोज्दै छन् । एक मधेश एक प्रदेश चाहनेहरूको मागमा , पहाडी जनजातिका लागि मात्र जातिय राज्य पस्किने तर उनीहरूको माग संबोधन हुन नसक्ने स्थितिले कुन तरंग पैदा गर्ला त्यो भविष्यको गर्भमा नै छ । अस्ति भर्खरै , एक मधेश एक प्रदेश नबने अरू कुनै प्रदेश बन्न दिइने छैन भन्दै तराईमा बसिसकेका पहाडी नेपालीलाई राज्यमा अंगीकृत नागरिकता दिन सकिनेछ भन्ने गर्जन गर्ने फोरमका जय प्रकाश गुप्ता र अन्य तराईया दलका प्रतिकृयाहरू भोलि कस्ता रूपमा आउने हुन र तिनको प्रभाव कहाँ कस्तो हुने हो त्यो कुराले पनि हाम्रो भावी नक्सामा अरू धर्सा थप्लान् वा हटाउलान् हेर्न बाँकि नै छ । यो कुरा देखिए जस्तो सजिलो त अवश्य छैन नै । य संघियताको गोलचक्ककरमा फँसेर , युगोस्लाभिया, पूर्व रसिया , नाइजेरिया , रुवाण्डा वा सुडान बन्ने अथवा , अरू कुनै समुन्नत मुलुक जस्तो नया नेपाल बन्ने भन्ने विषय नेपाली भविष्यको अत्यन्त पेचिलो प्रश्न हुनेछ । किनभने १९९० को विश्व राजनीतिको परिवर्तनमय दशक र त्यसपछि संसारका बिभिन्न मुलुकमा देखापरेका वा उठाइएका जातिय विषयहरू अनि यस्तो संघियताको बाटो अधिकांसत: सुखद रहेका भने छैनन् । हामीले आशा गर्नैपर्छ, नेपाल एउटा अपवाद बनोस् यो लहरमा । तैपनि , जातिय संघियतामा मुलुकको नक्सा बाँडेर पनि कामरेड बाबुराम र डाक्टर मानन्धरले, यो इथनिक बेस्ड हैन नेस्नालिटी बेस्ड संघियता हो भनेर अर्थ्याउन खोज्नुको मनसाय भने बुझ्न सकिएको छैन ।
पहिलो नेपाली ताराले चिर परिचित गायक दिपक लिम्बु पहिलो पटक दुवईमा दर्शकहरुलाई नचाउन आउदैछन् । उनलाई साथ दिदैछन् जनवादी गायक प्रदिप देवन र साहित्यकार तथा जनताका गायक माजुल साथै यूएईमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाईसकेका स्थानिय कलाकारहरु ।
नेपाली समाज यूएईले यहि नोभेम्वर २० तारिक शुक्रवारका दिन दुवईको अस्टे्लिया होटलमा आयोजना गर्न लागेको सुमधुर सास्कृतिक कार्यक्रममा यि कलाकारहरु पहिलो पटक दुवईका नेपाली दर्शकहरुका विचमा आफ्नो प्रस्तुती पस्कन लागेका हुन् ।
यूएईको जेठो समाज नेपाली समाजले यो भन्दा पहिला पनी नेपालका ख्यातिप्राप्त कलाकाहरुलाई यूएईमा ल्याई साथै यूएईमा नै कार्यरत नेपाली कलाकारहरुको साथमा विभिन्न नेपाली चार्ड पर्वहरुमा सास्कृतिक कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरीसकेको छ ।
उक्त कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक पानासोनिक रहेको छ भने अन्य प्रायोजकमा यूएई एक्सचेन्ज एयर अरेविया सिसेल नाईट क्लव वेष्टर्न यूनियन डेस्टिनी ट्ाफल्स नेपाली रेष्टुरेष्ट तथा एसिया एक्सचेन्ज रेहेको कार्यक्रमका संयोजक तुलसी तामागंले बताए ।
कार्यक्रममा महिला दिदी बहिनीहरुको लागि ३५ दिहर्राम्स र पुरुष दाजुभाइहरुको लगि ४५ दिहर्राम्सको टिकटको ब्यवस्था रहेको छ भने कार्यक्रम दिउस २ बजे देखि संचालन हुने बताईएको छ ।
हर्के आफूलाई ज्यादै भाग्यमानी ठान्थ्यो । सानै छँदा उसका बाले उसलाई ७ सा’लाँ कसरी प्रजातन्त्र आएर जनताको राज चल्न सुरु भएको हो भन्ने बताएका थिए र उ सधैं आफुलाई स्वतन्त्र नागरिक सम्झन्थ्यो ।
त्यसपछि उ जवान भयो र ४६ सालतिर फेरि आन्दोलनका कुरा चल्यो । गाउँको स्कूलमा ३ कक्षे पढ्दा पढ्दै खन-जोत नगरे अगेनामा आगो नबल्ने स्थिति आएकोले उसले अरु पढ्न पनि पाएको थिएन । गाउँका केही ठालुहरुलाई सोध्दा ‘७ सालको प्रजातन्त्र त नक्कली हो, अब चाही असली प्रजातन्त्र आउँछ’ भन्ने चाल पायो । प्रजातन्त्र पनि सक्कली र नक्कली हुन्छ र? उसले राम्ररी बुझेन, तर उसको ७ सालाँ प्रजातन्तर ल्याउने बाऊ बितिसकेका थिए फेरि यस पटकको प्रजातन्त्र पछि ‘गाउँ- गाउँमा बाटो, टोल-टोलमा स्कूल, सबैलाई काम, सस्तोमा माम’ दिने नाराबाट उ आकर्षित भयो र उ आफैं पनि लाग्यो आन्दोलनमा ।
खै के हो कुन्नी ४६ सालको असली प्रजान्त्र पनि २ -४ बर्ष नपुग्दै फेरि नक्कली नै भएको गाँई-गुई सुन्न थाल्यो उसले । पटक पटक प्रजातन्त्र ल्याउँदै, तीनै प्रजातन्त्र ल्याउने नेताहरुले फेरि त्यसैलाई नक्कली भनेको कुरा उसले बुझेन, तर यस्तो ठूला-ठुला कुरा बुझ्न आफ्नै पढाई कम भएको निर्क्योल निकाल्यो उसले ।
१०-१२ बर्ष गाँउमा ज्यान जोगाउनै मुश्किल भयो हर्केलाई । कहीले जनसेनालाई भई नभै भात पकाएर खुवाउनु पर्ने त कहीले जनसेनालाई खुवाएकोमा पुराना सेनाबाट लठ्ठी खानु पर्ने । जे होस अब भने किसानको ऋण माफ हुने, गाउँबाट सामन्ती साफ हुने । निजी बिद्यालय हटाईने, सरकारीमा शुल्क घटाईने। खाना, नाना र छाना सबैलाई बरोबर पाईने आकर्षक योजना सुन्यो उसले गाउँकै चौतारीमा ।
आजसम्म त यस्तो राम्रो योजना यस्तो सजिलै पुरा हुने उसले कहिल्यै सुनेको थिएन ।‘घर घरमा धारा, पानी खलल, बिजुली बत्ती गाउँ-गाउँमा, देशै झलल’ सुन्दा मात्रै पनि उसलाई जोश आउँथ्यो “ आफ्नी बुढीले आधा घण्टाको बाटोबाट पानी बोकेर ल्याउँदा र छोरा छोरीले मट्टीतेलको अभावका कारण टुकी बत्ती समेत बालेर पढ्न नसकेकोमा मन कुढिए पनि अब भने दिन फिर्ने भो भनेर फेरी उ होमीयो आन्दोलनमा ।
अरु त के जान्थ्यो र, उही ठुलाले जे भन्यो त्यही गर्‍यो । कुनै दिन खेतमा पानी लाउन छाडेर पनि जुलुसमा गयो, कहीले भैंसीलाई घाँस पराल छुटाएरै भए’नी धर्नामा बस्यो । उसका धेरै दिन यस्तै यस्तै देश बनाउने काममा बिते। जे होस बुढीले डोकाँ’ पानी बोक्न नपरे र छोराछोरीले सित्तैमा स्कुलमा पढ्न पाउने र आफ्ना घराँ नि सस्तोमा बिजुली बल्ने भए अरु जे सुकै होस उसले सोचेन। कति दिन भोक-भोकै दगुर्‍यो, कति पटक, लाठि र बुट पनि खायो, तर हिम्मत हारेन, घरकी बिरामी बुढीलाई पनि छाडेर उ ‘नयाँ नेपाल’ बनाउनै लाग्यो ।
धेरै दिन पछी उसले गाउँमै सुन्यो ‘जनताले जिते रे’ । कम्ता खुशी भएन हर्के, छिमेकीको रेडियोमा यस्तो खबर सुन्दा !, गाउमै पनि अबिर जात्रा निस्क्यो सबैजना नाचे, हर्केले पनि घराँ गएर बुढीलाई खुशिको खबर सुनायो ।
दिन, हप्ता, गर्दै महिना बिते, हर्के आँगनमै धारा, कोठामा बत्ती र छोराछोरीको स्कूलमा पैसा तिर्नु नपर्ने खबर आउँछ कि भन्दै कान ठाडो गर्दै हिड्थ्यो । तर खै त्यस्ता खबर त केही आएनन् उल्टै स्कूलमा पनि केजाती हो कर तिर्नै पर्ने भा’कोले झण्डै महिना दिन गाउँकै स्कूल पनि बन्द भए र कर समेत लागेको ‘फीस’ झनै बढी भएको कुरो पो सुन्यो हर्केले ।
उता केजाती कुरा नमिलेर हो गाउँमै खुलेको दूध चिस्याउने र संकलन गर्ने एउटा उद्योग पनि एक दिन जलाईएछ । अब हर्केका घरमा बन्ने १-२ लिटर दूधले पनि बजार पाउन छाड्यो । बाध्य भएर हर्केले ५-६ कक्षेमा पढ्दै गरेका छोराछोरीलाई घरकै काममा लगाउनुको विकल्प भेटेन ।
बुढी बिरामी परेकी धेरै दिन भो। गाउँमा केही नलागेर हर्के उसलाई शहर लाने बन्दोबस्तमा लाग्यो । ऋन,सापटी गरेर बुढीलाई काठमाण्डौ लग्न खोजेको पनि के के हो अग्रगामी सुधारको माग र स्वायत्तताको आन्दोलनले उसको बाटो खुलेको छैन ।
अघिल्लो हप्ता बल्ल-तल्ल हर्के बुढीलाई लिएर शहराँ पुगेको छ, तर खै आज पनि नागरीक सर्बोच्चताको लागि भयानक आन्दोलन र’छ । बल्ल बल्ल शहर पुगेका हर्केका जोडी शहरमै अलपत्र छन। एकापट्टिका वर्दिधारीहरु उसलाई ‘यहाँ भन्दा अगाडि नबढन’ भन्दैछन । अर्को तर्फका आन्दोलनकारी उसलाई ‘यो देशै तिम्रो हो त्यसैले जती सक्यो अगाडि बढ’ भन्दैछन ।
उ अलमल्लल छ । एकाथरी नागरीक सर्बोच्चता बनाउन थालेका रे, अर्काथरी जनताकै मौलिक हक जोगाउन लागेका रे । दुबैथरी जनताकै लागि लागिपरेका हुन भने विवाद के छ त्यो पनि बुझ्न सकेनन् हर्केका बुढा-बुढीले ।
अस्पतालको हडतालले बिरामी देखाउन पा छैन, गाडिको हडतालले गाउँ फर्कन नि पा छैन। एउटा मन्दिरको सत्तलमा सात दिन बसेपछि हर्केका जोडी बेहाल छन। शारीरिक पीडा र ग्लानिबस बुढीले हर्केलाई सोध्छीन, “...हैन बुढा! यसपालाको प्रजातन्तर पनि नक्कली नै रे ‘च कि क्या हो ?”
‘प्रजातन्तर नक्कली हैन बुढी, नेता नै नक्कली रहेछन... नत्र एउटै देशाँ तीन पटक प्रजातन्त्र कहीँ आउँछ…” हर्केको मुखबाट अचानक निस्कन्छ “...नेता नक्कली भएसम्म सक्कली प्रजातन्तर कहिल्यै आउँदैन जनतालाई... ”
लेखक विजयकुमार श्रेष्ठ
धादिङ्ग, हाल जोइन्ट वेस बलाद ईराक
परा पुर्वककालमा आफनो शरिरलाई वस्त्र विहिन बनाएर हिड्ने मानव जातिहरु केहि समय पछि मनका भावनाहरुलाई पविर्तन गर्न तिर लागे र केहि अङ्गलाई ढाकछोप गरेर हिड्दामा कस्तो होला भन्ने कौतुहलतालाई मनमा खेलाउन थाले । आफनो समबेदनशिल अङ्गहरुलाई प्रत्यक्ष नजरबाट हेर्दा जति असोभानीय देखिन्थ्यो त्यहि अङ्गलाई कृतिम साधनको सहायताले छोपेर समयले मागे अनुसार प्रदर्शन गर्दा अझ बढि शोभायमान देखिन्छ भन्न तिर सोच पुर् याउन थाले । परा पूर्वकालमा मानव जातीहरुले आफनो बल बुद्धीले भ्याएसम्मको उपाय लगाएर बन जंगलका पात पतिङगर र बोक्राको सहायताबाट आफनो शरिरलाई ढाक छोप गर्न तिर लागे । मानव जातीहरुले आफनो शरीर ढाक्नको लागी विभिन्न उपाएहरु लगाएर देखाउन नहुने अङ्गहरुलाई रुखका बोक्राहरुको सहायताले छोपेर मानव जातीको पहिचान गराउन सफल भएका थिए । यस्तै क्रममा आफनो आनी बानि पनि परिवर्तन गर्दै गए । हरेक दिन नयाँ नयाँ कुराको सृजनाको उत्पतीहरु
गर्न तिर कम्मर कसेर लागे । केहि समय पश्चात नै ति मानव जातिहरुले आफनो वंशसमाजको परिकल्पना गर्न थाले । महिला र पुरुषको भुमीकाहरु अलग अलग हुनु पर्छ भनेर कामको विभाजन तिर लाग्न थाले । एक अर्कामा देखा देखी सहबास गर्ने मानवहरु केही समय पश्चात एक अर्का देखी सर्माउने दकस मान्ने हुन पुगे र एकले अर्कालाई माया ममता र आदर भावले हेर्न तिर लागे । त्यसको केहि समय पश्चात गास वास र कपासको आवश्यकतामा एक अर्कामा सहयात्री भएर लाग्न थाले । केहि समय पश्चात नै परिवारको भुमीकामा बाधिन सफल हुन पुगे । हिजोको जंगली जिवनमा भोगेका तिता मिठा कुराहरुलाई सम्झेर कहिले काहि सपना हो कि विपना हेा भन्ने तिर सच्ने गर्दथ्यो । जव परिवार भएर एक अर्कालाई जिम्मेवारिको भारि बोकाउन थाल्यो त्यस पछि हरेक कुराको सृजना तिर आप्से आफ उजागर भएर लागे उनीहरुले शरिर ढाक्नुको महत्व र परिवार भएर बस्नुको महत्वलाई विस्तारै बुझदै गए । केहि समय पछि समाजको सृजना तिर लागे र मानव जातीको विकास गराउन सफल भए । मानिसलाई एक अर्कामा सहवास गर्न भाई चाराको नाता लगाउन देखि लिएर सबै कुराको विकाश गराउन सफल भएका थिए हाम्रा पुर्खा । त्यस पछि समाजको जग बसाली सके पछि एक अर्कामा तेरो र मेरो भन्ने कुराको प्रार्दुभाव हुन गयो । हरेक कुराको जगेर्ना गर्न तिर लागे र भोलीको लागी चाहिन्छ भन्ने सोचको पछाडि अडिग भएर आफनो आफनो परिवारको भविष्य प्रति चिन्तित भएर एउटा पुर्ण विकसित समाजको उत्पति गराएर पृथ्विमा मानव समाजको बस्ती बसालेका थिए ।
समाजको सृजना भए पछि एक अर्कामा नाता गोता र मान सम्मान जस्ता कुराहरुको विकसित हुदै गयो । हिजो वस्त्र विहिन भएर हिड डुल गर्ने मानिसहरु केहि समय पश्चात आफनो शसिरको गोली गाठा भन्दा माथिको भाग कसैले देख्यो भने सर्माउने हुन लागे । महिला र पुरुष सगै बसेर कुरा कानि गर्नसम्म हिचकिचाउन थाले । सानाले ठुलालाई माया ममता गर्ने दिन दुखीलाई आफुले सकेको सहयोग गर्न तिर लागेर भाई चाराको परिचय देखाउन सफल भएका थिए । आफनो धर्म सास्कृती अस्तीत्वको जगेर्ना गर्नको लागी हरेक कुरामा बन्धनको ताल्चा झुन्डयाउन थाले । एक आपसमा मिलेर गाउँ समाज र देशको विकाशतिर लाग्न थाले । समय वित्दै गयो हरेक कुरामा परिवर्तन भन्ने शब्दले मानिसहरुलाई गाज्न थाल्यो । आज यसो गरे कसो होला भोली यसो गर्दा कस्तो होला भन्ने कौतुहलतामा गाजिन थाल्यो । केही वर्षसम्म एकले अर्कालाई आदर मान मर्दनले सत्कार गर्न तिर लागेका थिए । समयले कोल्टे फेर्दै गयो ।समयले कोल्टे फेर्दै फेर्दै आधुनिक र विकसित परिभेषमा पाईला टेक्न सफल भए । मानिसहरु दिन डाहादै धनि बन्ने र आफु शक्तिशालि बन्ने सपनाले गाज्न थाल्यो । अहमताको रोगको समाजमा विजारोपण हुन गयो । कसरि हुन्छ एकले अर्कालाई तल पारेर दमन शोषण गर्ने परिपाटि मानव समाजमा फैलीन थाल्यो । हरेक दिन एकले अर्कालाई होच्याउने नराम्रो दृष्टिले हेर्ने र धन दौलतको लागी गिद्धे सोचाईमा लागेर आफनो कोहो अर्का कोहो भन्ने नजरले पनि हेर्नलाई छाड्ने परिभेषमा पुगे । परिवार के हो समाज के हो र कतिसम्म मान मर्दनको सस्कारलाई कुल्चनु हुन्छ कतिसम्मलाई कुल्चनु हुन्न भन्ने कुराको पहिचान हुन छाडा्यो । हिजोका ति जंगली युगका मानवहरुको परिस्थिती र परिभेषसँग जुधेर बाध्य भएर खुलम खुल्ला वस्त्र विहिन भएर गुजारा चलाएका थिए भने आज भोलीका मानव जातीले धन दौलतको धिनलाग्दो लाचारिमा फसेर धृणित कामहरु गरेर जंगली स्वाभाव देखाई रहेका छन । अनि भन्ने गर्दछन स्वातन्त्रताको सदुपयोग गरेको र मौलिक हकअधिकारको पहिचान देखाएको भनेर फुक्ने गर्दछन् । आफनो स्वातन्त्रताको हकलाई समाजमा प्रस्तुत गरेको भन्दै समाजमा धिनलाग्दा प्रबृद्धिका सुचना दिन आजका नर नारिहरु पछि परेका छैन । बेमौसमी फल फलाएर गाउ शहरमा दुर्गन्धको हावा फैलाउन सफल भएका छन् हाम्रा शिक्षित परिभेषमा मौलाएका अस्थिपाजरले भरिएका कोमल रुपी बासनादार कोमली । लुकाएर त्यो पनि दुई जनाको सहमतिमा राजी भएर गर्ने कार्यलाई सन्चार माध्यममा प्रस्तुत गराएर दिन डाहडै खुल्लम खुल्ला प्रतिस्पर्धामा लाग्न थालेका छन् । को भन्दा को कम भनेर आफनो गुप्ताङ्ग प्रर्दशनमा लागेर राता रात कुवेर बन्ने सपनामा डुबेर गुप्ताङ्गलाई खेल मैदान बनाएर हरेक दिन नयाँ र नौलो कार्य सृजना गर्न तिर लागेका छन् । अनि भन्ने गर्दछन यो त मेरो मौलीक हक अधिकारले दिएको कुरा हो भनेर पछिसम्म परेका छैनन् ।
के यहि हो त नौलो परिवर्तन नयाँ नेपालमा जो मानिसहरु देशको गहनाको रुपमा स सम्मान पाएर देश र समाजको हित हुने कुरामा लागेर भोलिको पुर्खालाई नयाँ सन्देश दिनु त परै जाओस जनावरले पनि नगर्ने घृणित कार्य गरेर गाउँ समाज र देशको बेईज्ज हुने गरि आफनो मौलिक हक अघिकारको सदुपयोग गर्न तिर कम्मर कसेर लाग्ने गरेका छन् । हावा नचलीकन पात अवश्य हल्लिदैन भन्ने उखान सर्वबिदितै सुन्दै आएका छौ । देशको गहना स्वारुप ससम्मान पाएका मानिसहरुले मनलाग्दी गर्दै हिड्ने अनि मेरो आफनो कुरामा किन अरुको टाउको दुखाई भनेर अछुतो बन्न खोज्ने प्रबृद्धिले नयाँ नेपालमा जरा गाडि सक्यो । अब देशमा यसरि नै खुल्लम खुल्ला रुपमा छाडा छोड्ने हो भने भोली गुप्ताङ्ग प्रदशनिको होडिङ बोर्डले बजारमा तहल्का मच्चाउन नसक्ला भन्ने कुरामा दुई मत छैन । त्यसैकारणले देश परिस्थिती अनुसार चल्न र चलाउन सक्नु पर्ने कानुनको पनि आवश्यकता परि आएको छ । त्यसैले गर्दा अब बन्ने सविधानमा सुरा सुन्दरिहरुको सम्भोगको विषमा पनि भिन्नै कानुनको आवश्यकताको महसुस नयाँ नेपालको नयाँ सविधानमा व्यावश्था गरिर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन आएको छ । अनि के नै भयो त नयाँ परिवर्तन हिजाका पुर्खाहरुले सन्चार माध्यमको सहारा लिन सक्ने थिएन भने आजका नव जागरुक देशको गहना कहलाएकाहरुको चर्तिकलामा परिवर्तन देख्न नेपालीले पाएका छौ । नराम्रो काम आफै गर्ने अनि पार्टि विसेक बनाएर अपहरण गराएर कुकृत्य लुकाउन खोज्ने यहि नेै हो हिजो र आजका परिवर्तनले दिएका नयाँ अनुभुती हो भनेर भन्नु शिवाय हामी जनतालाई अरु आभास हुने छैन ।
कामरेड !, के विदेशीकै ‘सहयोग’मा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने हो ?
त्यसो त देशमा अहिले अनेक आन्दोलन जारी छन । कहाँ, कस्ले, किन र कुन दिन, कसरी आन्दोलन गर्दैछन भन्ने वारेमा यकिन जानकारी त सायदै कसैसंग होला । विगतका दिनमा गाडिको ठक्करका विरुद्ध क्षतिपूर्ती पाउन आन्दोलन, ठक्कर हानेपछी क्षतिपूर्ती दिन नसक्नेको आन्दोलन र सधैकको यस्तै आन्दोलनबाट आजित भएकाहरुले आन्दोलन बन्द हुनपर्छ भनेर समेत आन्दोलन गरे ।
तर यो पोष्टमा चर्चा गरीन लागेको आन्दोलन भने कालो-झण्डा-तोडफोड हुँदैं अहिले चलेको नाचगान र ‘कब्जा’ आन्दोलनको हो ।
छोटो रुपमा केही समय अघिको नेपालको उतार चढाव हेर्ने हो भने, माओवादिको सरकार थियो, र देशका “खुख्खार” मानीएका नेता भएका दलहरु प्रतिपक्षमा । त्यसैबीच माओबादीको चरम महत्वाकांक्षा, अन्य दलको प्रतिपक्षमा बसेपछि सत्ताधारीको विरोध नै गर्नु पर्छ र सत्ताधारीलाई कुर्सिबाट खसाल्नु नै प्रतिपक्षको परम धर्म हो भन्ने पुरानो नीतिका कारण, अनि केही माओबादीका आफ्नै गल्ती, आफ्नो बारेमा रहेको ओभर ईष्टमेट र केही पर्दा पछाडिका अनेक तिकडमबाजी पछि माओबादी सरकारबाट निस्क्यो । पृष्ठभूमीमा जे जस्तो कुरा भए पनि र अगाडिका सोच जेसुकै रहेपनि आफ्नो स्थिती कमजोर देखिएपछि भएको माओबादीको बहिर्गमन भने पक्कै पनि नेपालको सन्दर्भमा एउटा राम्रै सुरुवात थियो ( नत्र अविश्वासको प्रस्ताब वा सांसद किनबेच नभै यस्ता परिवर्तन नेपालमा दुर्लभै थिए!)
सत्तामा छँदा जे जस्तो कुरा गरे पनि बाहिरिएपछि भने माओबादीले तीनका कुर्सी टुट्नुमा प्रतक्ष रुपमा विदेशी हात रहेको कुराको प्रचार प्रसार गरे ।
माओवादीको ‘सघर्षकाल’मा ( यसलाई उनीहरु जनयुद्धकाल भन्न रुचाउँछन—तर जताको मान्छे मरे पनि निमुखा नेपाली नै मरेका र त्यतिबेला र त्यो भन्दा धेरै देखी रजाँई गर्दै आएकासंग उनिहरुको आन्तरीक साँटगाँठ र लेनदेनका कारण कुनै पनि देश बेच्नेहरुलाई यो युद्धले केही असर नगरेकोले म यसलाई संघर्षकाल मात्रै भन्दै छु) उनीहरुको धेरै कुरासंग चित्त नबुझेपनि एउटा बिषयमा भने मलाई सधै माओवदीतर्फ आकर्षण रहेको थियो । उनीहरुका बोली, नारा र हौवा सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो माओबादी भित्र एउटा ‘कट्टर राष्ट्रवाद’ छ ।
विस्तारै शान्ति सम्झ्यौताका नाममा सिट, अधिकार र शक्तिको बाँडफाड हुँदै गएपछि सो बिषयमा पनि उदांग हुँदै गयो । कामरेड प्रचण्डले पहिला ‘क्रमभंग’ गरेर चिनको भ्रमण गरेर तुरुन्तै फेरि सो भ्रमणलाई ‘खेलकुद भ्रमण’को संज्ञा दिने बित्तीक्कै धेरै कुरा खुलेका हुन ।
फेरि हालकै प्रसंगमा फर्कदाँ, माओवादिको सत्ता बहिर्गमनलाई सधैं विदेशिको दवाव र चलखेलको परिणाम बताईयो । अब, आफू पूर्ण शक्तिमा हुँदा र सत्तामा हुँदा नै यस्ता चलखेलको सामना गर्न नसकेर सत्ता बाहिरीनु पर्ने अबस्था थियो भने सत्ता बाहिर आएर कसरी सो चलखेल रोक्ने हो बुझी नसक्नुको थियो । जे होस माथी भने जस्तै सभासद किनबेच नगरी उनीहरु निक्ले जुन सकारात्मक भने थियो ।
त्यसपछि भयो दबाब, खिचातानी र आन्दोलनको सुरुवात ।
अब मुख्य बिषयमा प्रवेश गर्दा, माओबादीले देशमा चलीरहेको विदेशी चलखेललाई रोक्नु पर्ने मुद्दालाई मूल रुपमा उठाई रहेका थिए। हो, देशमा विदेशिको चलखेल रोक्ने कुरामा भने हामीले कुनै दल, व्यक्ति वा समुहको नामै नेहेरीकनै समर्थन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । निकै तयारी र तामझामका साथ आन्दोलनका खाका प्रकाशीत गरिए । हेलिकप्टर र प्लेन समेत चल्न नदिने गरी देश ठप्प पार्ने घोषणा भयो । त्यसबीचमा सरकार र जनताका तर्फबाट समेत आन्दोलन हैन वार्ताबाट समस्या सुल्झाउन आग्रह भएको धेरै खबरहरु आए । तर माओबादीले कतै कसैलाई टेर-पुच्छर लगाएनन ।
अचानक सुनियो, अघिल्लो हप्ता केही विदेशी महामहिमहरुसंग उनीहरुका कुरा भएछन । अनि खबर आयो “माओबादीले हवाई नाकाबन्दी फिर्ता लिए” । भाषामा विदेशीको आग्रह, आज्ञा वा आश्वासन जेसुकै भनिए पनि यो नाकाबन्दी रोकिनुमा खुल्ला रुपमा विदेशी शक्तिको हात रहेको कुरा प्रष्टै भयो ।
हुन त यो नाकाबन्दी फिर्ता हुनु नेपाली जनताको हिसाबले एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो । तर सत्तामा हुँदा विदेशीकै चलखेलबाट बाहिरिने र विपक्षमा हुँदा पनि उनकै ईशारमा नाच्ने प्रबृती बाँकी रहेसम्म केका आधारमा जनताले उनलाई सहयोग गर्ने हो ? । दक्षिणकाले हल्लाए हस्तक्षेप र उत्तर र पश्चिमकाले चलाए समझदारी वा सहयोगको नाम दिने हो भने भिन्दै कुरा हो। हैन भने कामरेड !, के विदेशीकै ‘सहयोग’मा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने हो त ?
अपडेट: यस पटकको गाउंखाने कथामा अनुकराणत्मक शब्दहरको थुप्रो भएको ले उत्तर यो हो की त्यो
भन्ने निकै अन्यौल खडा गर्यो। यसो हेर्दा जांतो या मिल जस्तो लागे पनि सहि उत्तर भने लुगाको तान हो।
लुगाको तानमा घरी यताको काठ चलाइन्छ घरी उताको अनि बेला बेलामा धागो राख्ने काम गरिन्छ।
गाउंखाने उत्तरमा सहभागी सबैलाइ धन्यबाद। उत्तर मिलाउने पोस्तक जीलाइ हार्दीक बधाइ। पोस्तक जी
आफ्नो मन पर्ने गाउं माग्नुहोला।
खर्र वर खर्र पर, खर्र हा्ल्यो चारो, के हो?
अर्घाखाँची र पोखरामा भएका सडक दुर्घटनामा एकदर्जनको ज्यान गयो
काठमाण्डौ २२ कार्तिक । अर्घाखाँची र पोखरामा आइतबार विहान भएका छुट्टा छुट्टै दुर्घटनमा कम्तिमा १२ जनाको ज्यान गएको छ ।
अर्घाखाचीको गोखुङगाबाट सदरमुकाम सन्धिखर्क तर्फ आउदै गरेको लु १ ख ३९ ८७ नम्बरको बस आज बिहान हंसपुर गाविस ३ कमेरेपानी सडकबाट तल खस्दा कम्तीमा १० जना यात्रुको ज्यान गएको छ ।
झुमे नेपालीहरु दुवईमा देउसी भैलो सांस्कृतिक कार्यक्रममा
नेपाली समाज यूएईले यही अक्टोवर २३ शुक्रवार २००९ का दिन दुवईको एभरेष्ट होटेलमा आयोजना गरेको देउसी भैलो सांस्कृतिक कार्यक्रममा दुवईमा कार्यरत नेपालीहरु दिलै खुलाएर रमाए ।
नेपाली दूतावास अबुधावी यूएईका द्धितिय सचिव लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री तथा नेपाली समाजका उप सपाभति डा. असिफ अलि सिद्धिकिद्धारा सयूक्तरुपमा पानसमा मैन बत्ती बाली कार्यक्रमको उद्धघाटन गरिएको थियो ।
असिम महतको सब्द सम्योजन स्वर तथा अन्य कलाकारहरुको साथमा पूर्व मेची पश्चिम काली भईयो भेट दुवईमा यस पाली, भन भन बहिनी, देउसीरे भन भन्दै देउसीरे भाकाको गितमा उपस्थित सबै अतिथि, तथा दूवईमा छरीएर रहेका नेपालीहरुलाई स्वागत गरेका थिए । कलाकारहरुले भन भन भाई देउसीरे भन्दा उपस्थित दर्शकहरुले देउसीरे भन्दै साथ दिदा हल संगितमय भई गुञ्जिएको थियो ।
यूएईमा छरिएर रहेका किरण भट्टराई, डिक्की योञ्जन, प्रकाश पराजुली, पृय साड.वो, ज्ञान लामा, रविन परियार, मीना वाईवा, सूर्य के.सी, आशिष राई, सुलोचना श्रेष्ठ, रेखा घिमीरे तथा अन्य कलाकारहरुले विभिन्न भाकाका आधुनिक गित, लोक गित, तथा देउसी भैलो भाकामा गित तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
(जलेको ह्रदयको पहिलो भाग यहाँ छ ।)
त्यहाँ पनि बहामा युनिर्भरसिटीमा नेपाली प्रोफेसर टेकनाथ पोखरेलज्युलाइ भेटें। एहाँको साथमा उहाँको धर्मपत्नी पनी साथैमा भएकोले नेपाली पन्को खानाले मलाइ मुग्ध बनायो। अनि म त्यतैबाट टेकसासको इलपासोमा केही दिन बसी रहेको छु। म आज यतैबाट जमैकातिर उडें। क्यारिवियन टापुमा जमैका आफैमा मिश्रित सास्कृतिक पहिचान बोकेको पाएँ। भारतीय नागरिकको बाहुल्यताले मलाइ भारत मै बसीरहेको अनुभव भो। त्यहुको हरेका समुन्द्री वेहरुमा नरीवलका काँचो फल भित्रको पानीले तपाइकै अधरको मुस्को दिन्न्थ्यो। कति रसिलो थियो त्यो कति पोसिलो। बालुवाका कण कणमा तपाइकै चित्रहरु खोज्दै बार्को सानो पाण्डुबीमा यात्रा गरें। अहो यात्रा कति मनोरम थियो तर त्यो यात्रामा तपाइको न्यानो आलिंगन पनि हुदो होत कति आनन्द आउदो हो। छालले माथी उचाल्ने र पछार्ने गर्दा बेला बेलामा लाग्दथ्यो समुन्द्रका बिशाल माछाले नेपाली स्वाद पाउने छ। क्युवाकोको हवाना सहर पनि आफैमा सुन्दर तर फिडेल क्यास्ट्रोको भुतले
सातो खाएका कुन्ठीत जनताको मुहार मलिन देखिरहेको छु। यो मलिन अनुहारमा पनी तपाइलाइ खोजें कतै भेटिन। यादहरु मनभरी छछल्कीय नुनीला छालअरु झैं। पानी चाहेर पनि पिउन सक्ने अबस्था थिएन मेरो हाल त्यस्तै थियो मैले चाहेर पनि तपाइलाइ साथमा घमाउन सकिन। बार्कोको अर्को चुनौतीपुर्ण यात्रा शुरु गरें। मेक्सीको सम्म पुग्दा दिमाग खराव भयो। रिंगटा लाग्यो। बिरामी नै भए। मुन कम्जोर भएको बेला नै आत्मीय जनको याद आउदो रहेछ। तर…॥
मेक्सीकोको साँकृतिक सम्पदाको खानी लागी रहेछ मलाइ। घना बस्ती न्यानो मौसम र मायाजातीको सुन्दर मिश्रण पाएँ। चेतुमाल हुदै मेक्सीको सहर जुन बिस्वको तेस्रो ठुलो सहर भनेर चिनिन्छ। क्याथलिक धर्मले बाहुल्यता पाएको मेक्सीकन एतिहुसिक सास्कृतिक अबशेषहरुले सजाएको पाएँ। पोलांक्को देखी सान्तामारिया बजार जताततै घुमियो। मेक्सिको पुराना ति धरोहर भित्र लुकेको इतिहाँस पनि हेरिरहे। तर हाम्रो मायाको इतिहाँस पाएको छैन। अनि लामो पटयार लाग्दो बसको यात्रा गर्दै बेलिजतिर लागें। बेलिज सानो देश जहाँ गोखौली सेनाहरुले जंगल तालिम गर्दा रहेछन। हाइड्रो पावरमा काम गर्न आएको २०० जना नेपाली समेत भेटेर निकै रमायौ। जंगलै जंगल भित्र पुराना मायान रुइनहरु हेर्दै क्रोजल टाउन बेल्मोपान बेलिजसिटी कुन्तार्गोदा बेंम्गे हुदै म फेरी अर्को देश ग्वाटेमाला लागें। ग्वाटेमाला पनि सारै प्राकृतिक र सास्कृतिक सुन्दरताले सजीएको देश पाएँ। अनि म त्यहिबाटो हन्डुरसको र्पोतोर्कोतेस सानपेद्रोसुला घुमे। त्यो पलमा बसका झ्ययालबाट देखिने ति सुन्दर दृश्यहरुमा तपाइका स्मृतिहरु खोजें। मायाजाती कै बाहुल्यता रहेको हन्डुरस पनि कम सुन्दर छैन। टिगुचिगाल्पा राजधानीमा पुगेर मायाँ होटलमा बसें। झन्डै काठमाण्डौ जस्तो उच्चस्थानमा रहेको राजधानी स्पानिस एतिहुस र वर्तमान भित्र बाँधिएको टिगुचागाल्पाका हरेका ठाउमा मायाको अभावमा धेरै गित लेखें। तामालेस खाँए। मकैको पिठाले आटो झै घोलेर कुखुराको मासु लाइ स्वदिष्ट मसालाले पकाएर हरियो केराको पातभित्र पोको पारेको खाजा रहेछ।
जव ह्रदय प्रेमको कारागार भित्र निर्दोष कैदी भएर रहन्छ र बिछोडका बाणले घायल हुन्छ तव थाहा हुन्छ प्रेम केहो भन्ने। मदर टेरेसा बिनाका बिरामी झैं अलपत्र भएको छ जिन्दगी।
अर्काको घरमा बलेको आगोले आफनो घरको रोटी पकाउने स्वार्थी नेताहरुको चंगुलमा परेर देश क्षेतबिक्षत भएको छ। त्यो क्षेतबिक्षेत देशको ह्रदय नै मेरो जीवनको पहिचान हो। एकदिन तपाइको गोधमा आएर जीवनको दृष्टि बिसाउने मेरा सपनाहरु जलजलामा हिउ बिलाए झैं बिलाए। त्यहि चोटले बगेका आँशुको नसा पिउदै पुन सतिदेबी गुमाउदाका महादेब बनेर म घुमी रहे यस धरामा।
हन्डुरस बाट सान्साल्भाडोर हुदै निकारागुवा पुगें। मानगुवा पनी प्राकृतिक रुपमा बिशिष्त नै पाएँ। तरेली परेका होचा पहाड र दुवैतिर महासागरले छाएको सानो देश पनी औधी मन परयो। त्यहाँको प्रकृतिसंग खेल्दा डुल्दा पनि तपाइको झझल्कोले निकै सताइ रहेको छ। अनी बसको लामो यात्रामा फेरी अर्को उस्तै देश कोष्टारिका पुगें। कफी उत्पादनमा नाम कमाएको कोष्टारिका धेरै अगाडी पाएँ। मनोरम दृश्यहरु अनुपम सौन्दर्य र सान्तपि्रय देश मलाइ अति नै मन परयो। ज्वालामुखी पहाडको फेदमा रहेको सहर सानजोसे राजधानीको रुपमा निकै सम्मपन्न पाएँ। कफीको स्वादिष्ट पियाका चुस्कीहरुमा तपाइको मायाको अकल्पनीय अनुभव गरे। यो देश कफी उत्पादन गर्ने एक सम्पन्नसाली देश रहेछ। सानजोसेको बगलमा उभिएको होचो पहाड झैं तिम्रो याद स्मृतिको बस्तीमा सवैभन्दा उच्च थियो। बसैबसबाट लामो यात्रा तय गरी पानामा सहर पुगे। पारोको खानी र प्रकृतिको अनुपम मेल बनेको पानामा दक्षिणी अमेरिका र मध्य अमेरिकालाइ भुमीको मार्गले जोड्ने पुल जस्तै लागी रहेको छ। पानामाको नहर भनेर चिनिने त्यो मानव निमृत नहरमा जहाजी यात्रा गर्दै कोलम्वीयको कार्टाहिना सहरमा पुगें। कोलम्वीय अफिम खेतीको उतकृष्ट भुमी हो। कार्टाहिनाबाट बसमा फेरी तिम्रो यादहरुलाइ गितमा उन्दै बोगोटा सिटी पुगें। बोगोटामा साथी जर्मन जो नेपाल पनि घुमी सकेको रहेछ उस्को साथमा बसेर कयौं दिनह बिताए।
सन २००१ मार्च ७ गने फेरी म पृथबिको भुममध्य रेखामा पर्ने इक्वाइडोरमा आएँ। पृथ्वीको केन्द्रबिन्दुमा कतै हाम्रो बिस्वासको केन्द्र पनि छ की भनी फनफनी घुमे। पहिलो पल्ट यो ठाउमा टेकेर पृथिबिलाइ छुटयाइएका रेखाहरु हेरें। पुर्ब पश्चिम उत्तर दक्षिण तेहीबाट शुरु भएको रहे छ। त्यो रेखाहरुमा तपाइ र मेरो बिस्वासको रेखालाइ केलाएं तर रेखा कतै भेटिन। क्षेणिक मायाको नाटकिय रेखालाइ एकपटक थुकें। अनि त्यो पवित्र र एतिहाँसिक ठाउबाट निस्केर क्युटो सहर पसें। काठमाण्डौ झैं भल्कानिक पहाडै पहाडले ढाकेको न धेरै चिसो न धेरै तातो मनोरम सहरमा हराइ रहेको छु।
पोर्तोलोपे माछाला मान्ता सान्ताडोमींगो गयाकुल घुम्दै फेरी कोथोबालोमा अवस्थीत भल्कानिक कोतोप्याक हिमाल हेर्न पुगें। त्यो हिमालको उचाइ जस्तै हाम्रो प्रेमको उचाइ नाप्न खोजे तर त्यहाँ उचाइ थिएन त्यो त सेती भासिय झैं समयको गर्भमा कतै हराएको यिबोगान्त कथा मात्र थियो। अर्को चिम्बारासो हिमाल देख्न रहर त्यसै हरायो जसै हाम्रो मिलनका क्षेणहरु हराएका थिए।
अर्को चर्चित ठाउ गालापागोस आइल्याण्ड घुम्न पाइन जसरी हामीसंगै मनकामना जान पाइन। इक्वाइडोरमा पनि अमेरिकन डलर नै चलेको रहेछ। अचम्म लाग्यो छुटै स्वतन्त्र राष्टमा पनि अर्को देशको पैसाले स्थान ओगटेको रहे छ। सायद नेताहरुको नार्मदी र नेत्रित्वहिन राजनीतिको कारण त्यो अबस्थामा अमेरिकाले सघाएको होला। अनि जलेको ह्रदयलाइ सान्त पार्न साउथ अमेरिकाको अर्को देश ब्राजिलतिर लागें जुन देश फुटबलका जन्मदाता पेलेको देश भनेर जानिन्छ। रियो दे जेनारियोको सुन्दर सहर भित्र हराएँ। आहा कति राम्रो ठाउ। समुन्द्री छालमा रमाउदै तिम्रो स्मृतिमा गित लेखें। जुन गीत चर्चित गायिका नालिना चित्रकार बहिनीले गाएकी छिन। असारे धान पानी नै नपाइ सुकेर मरे झैं।
एक बिसाल चटानमाथी उभिएको पहाडको टुप्पोमा उभिएको भिमकाय जिसस् क्राइष्टको सालिक आफैमा पबित्र गन्तब्य बनेको छ। दिनभरी त्यही उचाइमा अनगिन्ती भावहरु गीतमा उर्तादै बसें। त्यो सुन्दर स्थानमा तिमी बिना एक्लै बस्दाको पिडा देशको मर्म नबुमुने नेताहरु झै बुझ्ने कोही भएन।
बसको झ्यालबाट दाँयाबाँयाका अनमोल दृष्यहरु नियाल्दै लामो यात्रा तय गरी फेरी काराकास सहरतिर लागें। भेनेजुयालाको राजधानी बनेको काराकास सहर आफैमा सुन्दर छ। संसार प्रशिद्ध सुन्दरी र सुन्दताको नमुना नै हो भेनेजुयाला पनि। प्रशान्त महासागरको छालले संधै चुम्ने त्यो भुमि सारै राम्रो लाग्यो। स्रसारको सवैभन्दा अग्लो छहरामा एक पटक मनमुग्ध भए जस्को आनन्द तपाइको छली मायामा थिएन।
काराकासको छोटो बसाइ पछि वोनारिस सहर अर्जेनटिनातिर उडें। नीलो आकास माथी उडेको जहाजबाट आमाजोनस नदी र पहाड अनि घनाजंगल हेर्दै अगि बढें। सेता बादलका टुक्रामाथी आफु उडीरहेको क्षेणले मुसक्क फेरी तिनै यादहरु छछील्कए आखाभरी । वोनसयरिस सहरका मनोरम दृश्यहरु नजरमा जम्मा गर्दै अगी बढे। एताउता हेर्छु मात्र स्पेनिस परीहरुमात्र पाउछु। कयौं पटक उनिहरुका हाउभाउमा तपाइलाइ खोजें उनिहरुको सहवासमा तिमीलाइ खोजें अहँ पाउन सकिन किन भने तिम्रो प्रेम त फुलचोकी डाँडामा हिउ बिलाए झैं बिलाइ सके छ। अनी फेरी सान्टीयागोमा रोकिएँ। राजनैतिक गन्जागोलमा रन्थनियको चिलीले भर्खर गति लिन लागेको भएर जोसिलो राष्ट लाग्यो। सान्त लाग्यो। देशमा गतिहिन बनाउने त गलत राजनीति नै रहेछ। एकपटक मेरो देशका अपांग नेताहरुलाइ देखेर थुक्न मन लाग्यो। राम्रो नेता देशमा नजन्मिएकै कारण हामी युगौ देखी भारतीय हेपाहामा परेका रहेछौ। बिशाल नेपाल गुमाएका नेपाली बचेको आफनो अलिकति माटोमा पनि भारतीय हस्तक्षेप देखेर भारत प्रति दुख लाग्यो। त्यो आत्मीय पिडा कित त देशलाइ थाहा थियो कि त तपाइको धोकाले मलाइ थाहा थियो। चिलिको स्वाद लिने अबसर पाएँ। सान्टीयागो अति नै मन परिरहेको छ मलाइ। बाहिरको मनोरम सहर हेर्ने कोसिस् गरे तर मनभित्र पाकेको पिडाको घाउले त्यो क्षेणलाइ गौण पारी दियो। अनि पेरुको लिमा तिर उक्लीएँ बसैबासबाट। ज्विनमा मेरो यो नै लामो यात्रा भयो।
लिमाको पौराणिक बस्ती र सांस्कृतिक तामझामको साथ आफनो बसाइलाइ स्मरणीय बनाउदै अगी बढे। साउथ अमेरिकालाइ सलाम गर्दै दक्षिण अफ्रिकातिर लागें। स्वतन्त्रताका पुजारी नेलसन मन्डेलाको भुमीमा टेक्ने सपना भित्र हराउदै जोहानसवर्गमा ओर्लि्रए। २००२ साल जुलाइ महिना गर्मीको प्रचन्ड धुप संगै साथ अपि्रको जाम्वियतिर लागे। लन्डन सिटी हुदै भिक्टोरिया सहर बाट बाहिर निस्के। त्यो मन्डेला भुमीमा मेरो प्रेमको स्वतन्त्र अस्तित्व खोजें कतै पाइन। बरु तपाइकै निहित स्वार्थको पाण्डुलीपि भेटियो। हाम्रो आपसी विस्वासको उचाइ पत्ता लगाउन खोजें तर त्यो पनि नेपाल झैं ठुलो संकटमा परेको थियो। अनी त्यहाँबाट म केन्याको नैरोवीमा रोकिएँ र केही दिन बिताएँ। बाक्लो भारतीयहरु भेटिए। कतै उजाड र बिरक्त लाग्दो बाताबरण पाएँ। गरिवीमा अत्यन्तै गरिव र धनीमा अति धनीको मारमा पिल्सीएको केन्याबाट फेरी म अन्तै मोडे मैले मेरा पाइलाहरु।
नैरोवीका ति उजाड उजाड बस्तीहरुमा आफुलाइ तुलना गरें। हो म त्यही उजाड प्रतिनिधि हँ। मेरो जीवनका सपनाहरु रित्तिएका छन। आशाका कोपिलाहरु चुडिएका छन्। बल्ल तान्जानियको दारेसलाममा पुगें। अनि इन्डियन महासागरको छालले हरपल चुमिरहेको कृर्षिजन्य भुमिमा पाइला राखें। किलीमन्जारो हिमाल कै फेदीमा बसेर अतितलाइ नियालें। संसारभरीका पर्यटकहरुलाइ मन तान्ने त्यो सुन्दरताले तपाइको धोकेबाज स्मृतिलाइ तान्न सकेन। चाहे जस्तो सुकै सुन्दर ठाउमा पुगुँ म यदि प्रेम छैन भने त्यो निरस नै हुदो रहेछ। त्यो भावले मलाइ त्यहाँबाट डोरयाउदै इजिप्ट तिर लग्यो। पुरानो धार्मिक इतिहाँस बोकेको काइरोमा अवस्थीत पिरामिड घुम्न पुगें। तीनवटा अग्ला मानव निर्मित पिरामिडमा एक किसिमको कौतहल थियो। कसरी कहिले बन्यो होला त्यो भब्यता। त्यतिमात्र कहुहोर बालुवामाथी पाइला राख्दै जमिनमुनी राखिएका कफनहरु हेरें। हो मेरो प्रेम पनि ति नै चिहान बनेर अस्ताएको अनुभव गरेँ। ।
साँच्चै मित्र गिताजी किन ममाथीको तपाइको प्रेम आज यस्तै कफनमा अस्ताएका अबशेष मुै भए अदभुत चित्र र चिहानका कफन हेरी निस्कीएं। मलाइ लाग्यो हाम्रो प्रेमको शव त्यही गाडीएको रहेछ। कहिल्यै पनि हेरी नसकीने अनन्त गाथाले भरिएको काइरोको पिरामिष आफैमा जिवित शाक्षी थियो। तर हाम्रो प्रेमको साक्षी केही थिएन। अनि म फेरी अर्को सहर नायल नदीमाथी पानीजहाज चढेर लामो यात्रा गरें। आहा जहाजबाट वरीपरीको मनोरम दृष्य हेर्दा अलौकिक आनन्द आउथ्यो।